Fitaovam-piadiana vita amin'ny tombokavatsa - Hevitra ho an'ny lehilahy sy vehivavy | Ny fanaovana tatoazy
Tanana vita amin'ny tombokavatsa, ohatra ho an'ny lehilahy sy vehivavy
Susana godoy | | Tatoazy amin'ny sandry, Tatoazy ho an'ny lehilahy
Ny fitaovam-piadiana dia iray amin'ireo canvases tsara indrindra ananantsika amin'ny vatan'olombelona. Tsy misy isalasalana fa fantatray fa izy io dia iray amin'ireo faritra lehibe nofidiantsika hahafahana misambotra tatoazy sasany. Ka ny sandry vita amin'ny tombokavatsa lasa mahazatra be izy ireo. Angamba ianao mahalala azy ireo amin'ny tanany, satria ny anarana roa dia manompo tsara mamaritra azy ireo.
Ny tanany, amin'ny tatoazy, dia tandindona manaingo ny sandry rehetra voaravaka. Hiainga hatramin'ny faritra soroka ka hatrany amin'ny hatotan-tanana izy ireo. Na dia toy ny amin'ny zava-drehetra aza dia afaka mahita fahasamihafana vitsivitsy isika. Na dia fahita amin'ny lehilahy aza izy ireo, ny vehivavy dia tsy lavitra any aoriana ary koa mifidy an'ity fomba ity. Ary ahoana ?.
1 Bika vita amin'ny tombokavatsa, maninona no mifidy an'ity safidy ity?
2 Maharary ve ny tatoazy vita amin'ny tanany?
3 Tanana manao tombokavatsa ho azy sy izy
4 Hevitra hodinihina
5 Ahoana ny fomba hisafidianana ny volavolako tatoazy
Bika vita amin'ny tombokavatsa, maninona no mifidy an'ity safidy ity?
Ny sandry vita amin'ny tombokavatsa dia mety tsara amin'ireo olona te-hitafy ireo tatoazy voafatotra. Araka ny efa noresahintsika, dia faritra ahafahantsika maka sary lehibe. Noho izany, mendrika ny misafidy lohahevitra iray ary avelao ho entin'izany isika. Ity dia tsy maintsy manarona tanteraka ny sandry. Misy hevitra maro, satria io faritra io dia mihoatra ny maha-zavatra azy. Aza adino ny mampiseho sombina hoditra amin'ity faritra ity. Izy rehetra dia hosaronan'ny endrika nofidinao. Vokatra mihoatra ny tsy mampino!
Maharary ve ny tatoazy vita amin'ny tanany?
Araka ny lazaintsika hatrany, ny fanaintainana dia miankina amin'ny olona miaritra azy. Tsy mitovy amintsika rehetra tokonam-baravarana fanaintainana. Na izany aza, io dia iray amin'ireo fanontaniana miverimberina indrindra. Noho izany, tsy maintsy maneho hevitra isika fa ny sandry, amin'ny faritra sasany aminy, dia tsy dia mampijaly noho ny ambin'ny vatana. Manana hoditra bebe kokoa isika ary izany dia misy vokany spaonjy mamela ny fanaintainana tsy dia henjana loatra. Angamba zavatra tsy mahazo aina koa dia ny toerana tokony hahafahana manao ny tatoazy feno. Na dia amin'izao fotoana izao aza dia misy fampiononana maro izay studio sy mpanakanto tatoazy mametraka eo am-pelatanantsika.
Tanana manao tombokavatsa ho azy sy izy
Tsy misy isalasalana, ho an'ny lahy sy ny vavy dia hisy safidy tonga lafatra foana amin'ity fomba ity. Na dia hita amin'ny lehilahy matetika aza izy ireo dia mahazo toerana. Ny teo aloha dia misafidy ny vita foko sy amin'ny endriny misy vokany 3D. Mba hanaovana izany dia azonao atao ny mieritreritra andiana marika maromaro na milaza tantara manokana amin'ny alàlan'ny sary. Hanana toerana malalaka ianao, ka tsy tokony hiasa saina amin'izany. Ny vehivavy dia afaka misafidy ny fampifangaroana ny voninkazo sy loloary koa famaranana loko sy foko feno. Mazava ho azy fa samy hafa ny tsiro tsirairay!
Ny iray amin'ireo hevitra tokony hodinihintsika dia ny ampahany kiho. Raha tsy misy fisalasalana dia iray amin'ireo faritra marefo indrindra izy io ary manana faritra tsy manome valiny marina loatra koa. Misy collagen bebe kokoa ary toy izany famirapiratany mazava izany. Noho io antony io dia voalaza fa azo esorina amin'ny fomba mora kokoa ny ranomainty. Noho izany, tsara kokoa foana ny manoro hevitra anao talohan'izay, na manao izay rehetra azo atao mba tsy hananan'ny endrika endrika ity habaka ity.
Ahoana ny fomba hisafidianana ny volavolako tatoazy
Na dia azonao antoka aza fa mazava momba an'io, mety tsy fantatrao raha ny sainao dia handray ny tananao manontolo. Izany no antony ahafahanao mandeha manao karazana sary na ankamantatra. Ny zavatra tsara indrindra dia ny mandeha manao sary na manangona ireo antsipiriany rehetra na tantara tianao ho entina eny am-pelatananao ireo. Amin'izany fomba izany dia ho fantatrao na ho azonao ny valiny farany. Tsy mety ve izany alohan'ny hanombohanao manao tatoazy? Tsy maintsy midina miasa fotsiny ianao izao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » Tattoos on » Tatoazy amin'ny sandry » Tanana vita amin'ny tombokavatsa, ohatra ho an'ny lehilahy sy vehivavy
Tatoazy maso ejiptiana na ny mason'i Horus
Tatoazy voninkazo kely ho an'ny vehivavy: fahendrena sy fahamendrehana